बंगालको हावाहुरी पोखरामा पनि आउने त हैन ? | eAdarsha.com
बंगालको हावाहुरी पोखरामा पनि आउने त हैन ?
पोखरा, २० वैशाख । नेपालका अधिकाशं भागमा शुक्रवार विहानै देखि मौसम परिवतृन भइरहेको छ, केही समय घामलाग्ने त केही समय कुहुरो लागेको छ ।
काठमाण्डौ, पोखरा र बुटवल तथा देशका पूर्वी शहरहरुमा शुक्रवार विहानदेखि नै मौसम फेरवहल भइरहेको छ, जसका कारण अधिकाशंमा हावाहुरी नेपालमा पनि आई मानवीय र भौतिक क्षति हुने त हैन आशंका वढीरहेको छ ।
देशका प्राय सबै भू–भागमा मौसम बदली भई हावाहुरी र पानी पर्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । बंगालको खाडीबाट विकसित भएको शक्तिशाली चत्रवात ‘फानी’ तथा पश्चिमी वायुको प्रभावले बिहीबार साँझदेखि शनिबारसम्म नेपालको मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।
बंगालको खाडीमा विकसित भएको शक्तिशाली चत्रवात ‘फानी’ शुक्रबार दिउँसोबाट नेपाल प्रवेश गर्ने अनुमान छ,’ मौसमविद्का अनुसार यसको असर पूर्व र मध्य नेपालमा बढी पर्ने देखिन्छ। फानीको प्रभावले हावाहुरीसहित चट्याङ र वर्षा हुने अनुमान मौसमविद्को छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमपात समेत हुन सक्ने बताइएको छ ।
बंगालको खाडीको दक्षिण पूर्वी भागमा विकसित भैइरहेको ‘फानी’ बिस्तारै उत्तर–पश्चिम दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ। यसले भारतमा भने धेरै असर गर्ने अनुमान नेपालका मौसमविद्को छ। शुक्रबार अपरान्हपछि नेपालमा पनि यसको असर देखिन सक्ने भएकाले सतर्क रहन महाशाखाले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। महाशाखाका अनुसार पश्चिमी वायुको कारण बिहीबार साँझदेखि शुक्रबार दिनभरी जसो नै नेपालको पश्चिम र मध्य क्षेत्रको मौसम बदली हुने छ। कतिपय ठाउँमा मेघगर्जन र हावाहुरीसहित बर्षा हुनेछ । बुधबार साँझ स्थानीय वायुको प्रभावले काठमाडौँ र पोखरा उपत्यकासहित तराई क्षेत्रमा हावाहुरीसहित सामान्य वर्षा भएको थियो ।